Budata Turbo Cleaner APK maka Android
Budata Turbo Cleaner
Budata Turbo Cleaner,
Turbo Cleaner bụ ngwa kachasị mma gam akporo na-enyere ndị ọrụ aka ịgbatị gam akporo, mmezi gam akporo na ndọtị ndụ batrị.
Turbo Cleaner, ngwa ị nwere ike ibudata ma jiri nefu na ekwentị gị na mbadamba gị, na-achịkọta ọtụtụ ngwaọrụ ị nwere ike ịchọ maka mmezi gam akporo. Ebumnuche nke mmepe nke ngwa bụ iji nweta arụmọrụ kachasị na ngwaọrụ gam akporo gị. Maka ebumnuche a, a na-ahazi ngwaọrụ gị ma gbochie iji akụrụngwa sistemụ gị na-enweghị isi. Nihi njirimara ihicha RAM nke ngwa ahụ, nke ị nwere ike iji otu mmetụ rụọ ọrụ, RAM nke ngwa ndị na-arụ ọrụ nazụ na-ekpochapụ na-enye ngwa na egwuregwu iji rụọ ọrụ dị elu.
CCleaner bụ ihe ịga nke ọma na usoro njikarịcha na usoro nchekwa nke nwere ike ịme nhicha PC, osooso kọmputa, iwepụ mmemme, nhichapụ faịlụ, nhichapụ ndekọ, nhichapụ na-adịgide...
Ị nwere ike ihichapụ nchekwa nke ngwaọrụ gam akporo gị site na iji ngwa...
Turbo Cleaner nwekwara ike nyochaa faịlụ ndị na-eme ka ngwaọrụ gam akporo gị sie ike ma na-egbu oge. Nihi njirimara ihicha faịlụ na-enweghị isi nke ngwa ahụ, ị ​​nwere ike iji otu mmetụ ihichapụ faịlụ ndị a achọpụtala, hapụ ohere ma gbochie ngwaọrụ gam akporo gị ka ọ kwụsịlata.
Turbo Cleaner nwere ike ijikwa ngwa na ọrụ na-agba nazụ ngwaọrụ gam akporo gị. Nụzọ dị otu a, ịnwere ike ịkwụsị ọrụ na ngwa na-ebelata ndụ batrị gị. Nihi njirimara nkwụsị siri ike nke ngwa ahụ, a na-egbochikwa ịmalitegharị ngwa na ọrụ ndị a ugboro ugboro.
Turbo Cleaner nwere ike ịchọpụta ma kwụsị ngwa na-eme ka ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba ekpo oke ọkụ. Ngwaọrụ gị achọghị ịgbanye mgbọrọgwụ iji jiri ngwa ahụ.
Turbo Cleaner Ụdịdị
Mmepụta: Turboc Dev